Ukudala i-Super Bowl Box Pool
Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Imidlalo yokuGembula
Umdlalo we-Super Bowl, iqela lebhola leSizwe leBhola leBhola, liye lenza umbukiso okhangela nabo abaqhelekanga umdlalo webhola. Ibhobho yebhokisi yindlela enye yokudala inzala-kunye nenkxaso-mali-kubalandeli bebhola kunye nabangabantwana abangafani.
Ibhokisi lebhokisi liqukethe igridi yeebhokisi ezithengiswayo, kunye nebhokisi ngalinye lihambelana namanani amabini-enye efana nekholomu ibhokisi kwaye enye ifana nomqolo. Elinye iqela linikezelwa ngamanani omqolo kwaye elinye iqela linikezelwa ngamanani ekholomu. Ukuba idijithi yokugqibela yamanqaku nganye yeqela ngalinye lihambelana nala manani amabini, umntu othenge le bhokisi uyinqobile. Ngokomzekelo, ukuba amanqaku okugqibela angama-21-14, umntu onoku-1 kunye no-4 kumaqela afanelekileyo uwunqobileyo.
Ngokuqhelekileyo, imali yemali ikwahlukana ngokusekelwe kumanqaku ekupheleni kwekota nganye kunye namanqaku okugqibela. Umntu onayo ibhokisi ehambelana nomgca wokugqibela ufumana umvuzo omkhulu.
01 ngo 04
Yakha iGridi ye-100 yeBhokisi
Okokuqala, yenze iibhokisi zebhodi yakho yebhokisi ye-Super Bowl usebenzisa ithemplate elandwayo okanye ngokubamba ngesandla. Ukuba udweba imigca eyi-11 engezantsi kunye nemigca engama-11, uya kuba nemigca e-10 yeebhokisi ehamba kunye nemigca eyi-10 iyahla, ngokubakho iibhokisi ezili-100. Ukushiya indawo eyaneleyo yamagama, yenza loo bhokisi ibingenani enye intshi nganye.
Tshintsha elinye iqela phezulu kwebhokisi (iikholomu) kunye elinye iqela liya kutsalwa ngaphantsi kwesigxina segridi (imigqa). Ukuba ufuna ukuqala i-pool yakho ekuqaleni kwaye amaqela ayengaziwa xa udala idama, unokuzichonga ngenkomfa-iNkomfa yeSizwe kunye neNkomfa yaseMelika.
02 we 04
Yiba nabaThengi bazalise kwiiGrid Squares
Ngaba ngaba bathengi babhala amagama abo kwizithuba zabo abathengayo kwaye baqokelele imali. Isikwere ngasinye sinokubaluleka nayiphi na imali oyikhethayo, kodwa inani eliqhelekileyo lebhokisi li-$ 5, i-$ 10, kunye ne-20. Bala imali kwaye uyibeke endaweni ephephile. Ngaphandle koko, unokushiya umqolo wokuqala kunye nekholamu yokuqala engagqibekanga ukuze uzalise amanqaku kumanqaku.
03 we 04
Dweba iNombolo kwiRowi nganye kunye neKholamu
Emva koko, jonga iinombolo zemigca kunye neentsika zesikwere. Ngokukhawuleza udwebe i-zero ukuya kwisithoba uze uzigcwalise phezulu kwikholam nganye. Yenza okufanayo kumqolo ngamnye.
Ngokomzekelo, uPawulos unecala elihambelana neQela A elifaka amanqaku ayisithupha kunye neQela B ibhala amanqaku amabini.
Kwiibhobho zebhola, inombolo yokugqibela yamanqaku eqela isetyenziselwa ukuchonga isikwele esiphumelayo. Kule mzekelo, uPawulos uya kuphumelela echibini xa iBatrice B yenzeka ukulwa neqela le-A ngamanqaku angama-12-6 okanye alahlekelwe ngu-12-26.
04 we 04
Umdlalo wokubukela uze unikele ngemali
Ukuba uya kuhlawula inxalenye yemali ekupheleni kwekota nganye, hlukanisa imali kwiimvulophu, uze ubukele umdlalo. Xa nganye kwikota iphelile, yiya ebhodini ukuze ubone ubani onesikwere esifanayo kwaye abanike imali yabo.
Ziziphi iihashe eziye zabona iKentucky Derby?
Indlela yokudibana ngebhokisi
Ukubeka i-Boxed Trifecta Bet kwi-Horse okanye kwi-Racing Racing
Ukuqonda indlela iPapasho isasazeka ngayo kwi-Betting Sports
Uluhlu lwe-Top Winning Kentucky Derby Jockeys
2017 IHlabathi yeHlabathi yeTheyimthebhile
Kutheni ukuPhathwa kweMidlalo kuNcedo
Ukuchonga iikhodi zezemidlalo ezixabisekileyo
Kulo mzobo ukukrazula iXesha elithi "Freestyle" lithetha ezimbini
Inkcazo yeDuctile kunye nemizekelo
Ukubulawa kuka-Amritsar ka-1919
I-ROSSI Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
Indlela yokudibanisa isenzi elithi "Entrare" ngesiTaliyane
Imbali yama-Olimpiki e-1900 eParis
Iingxabano Zomtshato We-Gay: Amaqabane angamaGay aqhelekanga
Indlela yokubeka ngokufanelekileyo i-Surfboard yakho kwiRack Rack yakho
I-Chromatography Inkcazo kunye nemizekelo
I-Georgia Tech Admissions Statistics
Ngaba Unokubhena isikhokelo seKholeji?
Taoist Immortal Lu Dongbin (Lu Tung Pin) - Isingeniso
Iingcono ezi-12 ezingabonakaliyo yiNkosana
Yintoni Unokuyiva Ngokwenene Ngendawo?
Indlela yokusebenzisa izihlanganisi zesiTaliyane
Ukufa kukaStalin: Akazange Aphunyelele iziphumo zezenzo zakhe
Top John Mellencamp Iingoma zee-80s
Indlela Yokwenza Amakristali
Ibali emva kweEminem Vs. Mariah Carey
Indlela yokuba ngumthengisi omkhulu we-Blackjack
Ukulungiswa (ukuTyikitya nokuBumba)
Bhalisa i-DLL kunye ne-ActiveX Controls kwi-Application Delphi
I-Synopsis yeBallet, iCoppélia - Act 1